Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Slackware? Ndenye na mfe ndu | Site na Linux
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Slackware? Ndenye na mfe ndu
Ndewo ndị enyi sitere na FromLinux, mgbe ogologo oge na-enweghị ezipụ ihe ọ bụla, lee ha ọzọ. Taa, aga m egosi gị otu ị ga - esi edozi Slackware anyị ka ị wụnye ya.
1 Kedu ihe kpatara iji Slackware?
2 Ebe m na-ebudata ya?
3 Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Slackware?
3.1 Tinye onye ọrụ ọhụụ:
3.2 Kwado sudo na onye ọrụ anyị:
3.3 Tugharia sistemụ na Spanish:
3.4 Hazie ebe nchekwa:
3.5 Mmelite usoro:
3.6 Bido usoro ozugbo na ọnọdụ eserese:
3.7 Gbanwee ojiji ahụ site na nkeji abụọ ruo sekọnd ise:
3.8 Olee otú iji wụnye nchịkọta site sbopkg…?
3.9 Ọ bụrụ na anyị jiri akwụkwọ ndetu:
3.11 Mkpakọ ngwaọrụ:
3.13 N'ihe banyere iji usoro 64 bit:
3.16 Tugharia Libreoffice:
3.17 32 dị:
3.18 64 dị:
3.23 Nchịkọta nhọrọ ọhụrụ maka KDE ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị (dị ka oyiyi ahụ):
Kedu ihe kpatara iji Slackware?
Ọma onye ọ bụla maara na ọ ga-abụ ihe karịrị ọnwa ise gara aga m mere mgbanwe nke Debian a openSUSE n’igwe m niile tinyere sava m. Ugbu a ka m mere otu ihe ahụ m gwara onwe m .. Ọ bụrụ na openSUSE apụla EBU nke a wee site na Slackware .. Kedu ihe Slackware ga-adị? Ma ekpebiri m ịnwale ya :).
Nke a bụ obi ụtọ m na enweghị m ike ịnwe mmetụta ọ bụla na ọ bụ ezie na mmadụ ga-egwu obere na mpịakọta nke slackpkg, wụnye, mmmmmmmmmmmm na weebụsaịtị Slackbuilds, o doro anya na ọ bara uru ebe ọ bụ na anyị nwetara arụmọrụ nke anyị agaghị ahụ ọbụlagodi Debian, Fedora, RHEL, EBU, Arch, wdg ...
Naanị distro nke gosipụtara arụmọrụ ya bụ Gentoo na oge enweghị mkpokọta yana ntinye dị ogologo, ebe etinyere Slackware na nkeji 20 (dabere na ngwanrọ anyị họọrọ): D.
Akụkọ m ... akụkọ nke Debian, nna Linux, onye m hụrụ n'anya ruo ọtụtụ afọ na onye m gafere site n'aka ụmụnne RHEL na ụmụ ha, na emesịa site na nwa nwanyị nke ngalaba nwere onwe ya meghereSUSE nke nne SUSE nke meghere m ụzọ ụwa a na-enwetụbeghị ụdị ya. Nne nke nkesa Linux .. Slackware: D.
Ogologo uzo duru m gaa uwa nke ana akpo Linux maka real. Worldwa nke yiri otutu Unix. Worldwa nke a na-achịkọta nchịkọta. Worldwa nke etinyere nchịkọta junk mgbe ịchọrọ ịwụnye ngwa ebe ọ bụ naanị na anyị chọrọ naanị ndị ịdabere na ha. A ụwa nke kwụsie ike. Withoutwa nke na-enweghị nsụgharị na dystrotitis.
N'agbanyeghị nke a, distro a dị ugbu a, a na-emelite ya kwa oge .. Iji nye otu ihe atụ: Ihe nkedo 14.1 Ọ bịara na 7.11.2013. Anyị niile maara ihe mere n'oge na-adịbeghị anya na OpenSSL na anyị niile maara na isi ndị na-agbagha agbagha agbachala nsụgharị OpenSSL ha. N'ihe banyere Debian ma ọ bụ RHEL, ha kpochapụrụ nsụgharị ha 1.0.1e. Ihe nkedo 14.1 Ọ pụtakwara na nsụgharị a, mana mgbe ọ hụrụ ahụhụ a, ọ họọrọ itinye mbipute 1.0.1g ozugbo na ngalaba ụlọ anụ. Ntughari a na-ahọrọ itinye nsụgharị ọrụ kama ịme ihe nwere ike ime ka ọtụtụ chinchi iche.
N'ihi ya, edebere m Slackware na igwe ọrụ m niile yana sava m na-ezube ịnọ ebe a. N'ime ọnwa ndị a, anọ m na-anwale distro a nke ukwuu, miri emi iji mara ma ọ bụrụ na usoro a ziri ezi. Azịza ya bụ ee .. Mama ee
. Ihe mgbagha a meriri m, jidere m kpamkpam na enweghị obi abụọ ọ bụ ihe kachasị mma m nwara. Enweghị m okwu ndị ọzọ.
Enweghị m oge ọzọ, ụfọdụ onyonyo nke sistem m:
Ebe m na-ebudata ya?
Agaghị m abanye n'ime otu esi eme echichi n'onwe ya dịka ọ dị mfe. Ọ bụ ihe ntinye ederede ederede, mana ọ na - eduzi anyị site na nkwụsị.
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Slackware?
Tinye onye ọrụ ọhụụ:
N'oge mkparịta ụka nke gosipụtara mgbe nke a gosipụtara:
pịa igodo elu gị keyboards na njedebe nke otu akara na-na akpaaka-dechara na kwuru isi tinye: wheel ma pịa tinye.
Kwado sudo na onye ọrụ anyị:
Anyị na-echekwa dọkụmentị na CTRL + O wee mechie CTRL + X.
Tugharia sistemụ na Spanish:
Depụta asụsụ niile dịnụ: mpaghara-a
Dochie mbupụ LANG = en_US:
Dochie setenv LANG en_US:
Hazie ebe nchekwa:
Uncomment njikọ nke Portugal ebe Spain enweghị repos:
slackpkg melite slackpkg melite gpg slackpkg nweta nkwalite-niile
Bido usoro ozugbo na ọnọdụ eserese:
Gbanwee id: 3: initdefault: ka:
Gbanwee ojiji ahụ site na nkeji abụọ ruo sekọnd ise:
Dochie oge nkwụsị = 2000 na:
Ugbu a, anyị wụnye ngwa ọrụ bara ezigbo uru, nke ga-achịkọta ma wụnye mmemme maka anyị:
Anyị na-emelite nchekwa data nke mmemme dị na Slackbuilds.org:
Olee otú iji wụnye nchịkọta site sbopkg…?
Anyị na-enyocha na ngwugwu ahụ dị na http://slackbuilds.org/ ma rịba ama ndị ịdabere na ya niile.
Mgbe ahụ na-agba ọsọ: sbopkg -i "ebughibu" (ọ bụ ihe atụ nke wụnye ebughibu). Echefula na tupu itinye ngwugwu anyị chọrọ ịwụnye, anyị na-etinye ndabere ya niile. Ugbu a, anyị wụnye mmemme bụ isi:
Ọ bụrụ na anyị jiri akwụkwọ ndetu:
sbopkg -i "orc texi2html libebml libmp4v2 libcuefile libreplaygain lame x264 a52dec faad2 speex twolame lua portaudio libass libavc1394 libdc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdnav libmatpagerpiderp
N'ihe banyere iji usoro 32 bit:
Download jdk site na oracle na ụdị 7u51 ya (jdk-7u51-linux-i586.tar.gz):
Anyị na-ebudata slackbuild:
Tapawa faịlụ jdk-7u51-linux-i586.tar.gz na folda jdk nke anyị meghere na mbụ wee mee ederede:
Nke a ga - emepụta ngwungwu a na - enweghị atụ dị ka nke a (ị na - ahụ ụzọ na aha ngwugwu emepụtara) ma anyị wụnye ya:
N'ihe banyere iji usoro 64 bit:
Download jdk site na oracle na ụdị 7u51 ya (jdk-7u51-linux-x64.tar.gz):
Tapawa faịlụ jdk-7u51-linux-x64.tar.gz na folda jdk nke anyị meghere na mbụ wee mee ederede:
Anyị na-ebudata slackbuilds na libreoffice-helppack na libreoffice-langpack:
Anyị na-emeghe faịlụ ndị ebudatara.
Anyị na-ebudata ngwungwu libreoffice:
Anyị na-mado faịlụ ndị a na-enweghị decompressing ha na slackbuid folda kwekọrọ ma mepụta edemede na abụọ:
Na anyị wụnye nchịkọta etinyere (ị na-ahụ mgbe niile ụzọ na aha ngwugwu emepụtara):
ARCH = x86_64 ./libreoffice-helppack.SlackBuild ARCH = x86_64 ./libreoffice-langpack.SlackBuild.
Wepụ ya na-enweghị wụnye ya, anyị nwere ike iji ya site na ịme ihe ngwugwu teamviewer na folda a.
Anyị na-agbakwunye ngwugwu na ndepụta mmalite:
Anyị na-ede nke a na njedebe:
ọ bụrụ na [-x /etc/init.d/ufw]; mgbe ahu /etc/init.d/ufw bido fi
Anyị na-enyere firewall aka:
Anyị na-ekwe ka ssh ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya:
Nchịkọta nhọrọ ọhụrụ maka KDE ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị (dị ka oyiyi ahụ):
Na voila .. Site na nke a, ha nwetara usoro a kwadebere maka iji ya mee ihe n'ozuzu: D. You hụla na o sighi ike dịka ọ nwere ike iyi. Ekele linuxeros ma echefula ịza ajụjụ :).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Slackware? Ndenye na mfe ndu
Na (vector linux) dị ka nri nke Slackware
Ee mana ọbụghị otu 😀
M mechara kwuo hello =) ...
Slackware agaghị enwe nna mana enwere m ike iche n'ime ọnwa ole na ole ị gbalịrị "linux si ọkọ", ma na ị gbanweela igwe gị niile na sava gị ... yana ntuziaka kwekọrọ na ya
Enweghị m ike iche n’ịme ụdị ihe nzuzu a: D. Anọ m na-eche banyere ya n'etiti Slackware na Gentoo. M si na nna Debian wee gaa na nne Slackware ma ebe a ka m nọrọ: D.
Lelee oge nkwado nke ụdị Slackware nwere:
Echere m na ọ dị mma maka iji rụọ ọrụ.
Debian sistemụ arụmọrụ m nwere nsọpụrụ na enwere m obi abụọ na otu ụbọchị ga-ewepụ na kọmputa m ... Echiche nke ịwụnye slackware batakwara m n'uche ogologo oge gara aga, mana mgbe m nwara ya ọ bụ n'oge m mere. Aghọtaghị m ụfọdụ ihe na okporo ụzọ bịara siere m ike ike wee kwụsị ọrụ ahụ ... Dị ka ị na-ekwu, Gentoo na-ewere ("obere") mana ọ ga - emechaa ...
Ka o sina dị, ihe ndị a magburu onwe ha banyere slackware, enwere m olileanya ịga n'ihu na-agụkwu banyere ya na usoro ndị siri ike yana ihe ngwọta na-egosi n'ụzọ ...
Ogologo ndụ nnwere onwe… !!!
Slackware bụ nkesa m chere gbasara itinye ọtụtụ oge, agụọla m na ọ bụ ya kacha kwụsie ike (mana n'ezie). N'ezie ọ ga-eju m anya ma ọ bụrụ na ọ nwere obere chinchi karịa CentOS, nke nyere m nsogbu 0 n'oge m nwalere ya.
Agbanyeghị, ana m alaghachi n'otu ihe ahụ: nkwakọ ngwaahịa n'èzí. Eziokwu ahụ bụ na Debian na-ebupụta nkwụsi ike na ngwugwu ochie abụghị ihe efu, ọ bụ n'ihi nnwere onwe nke GNU / Linux yana ụlọ akwụkwọ ọhaneze na-akpata esemokwu n'etiti mmemme nwere ike ibilite, yana ule na oge dị mkpa iji chọpụta ha. Slackware doro anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nkwakọ ngwaahịa ya, mana Slackbuilds anaghị arụ ọrụ, ha bụ ngwugwu ndị eleghi anya ha anwalebeghị nke ọma na mgbe oge ruru na ha nwere ike ịrapara. Ọ bụrụ na ọbụlagodi na Debian ọ na-eme m ọtụtụ nchịkọta, enweghị m ntụkwasị obi na Slackbuilds agaghị eme ya. N'aka nke ọzọ, na mpụga ngwongwo enwere nsogbu nchekwa: ọ bụrụ na achọpụta njehie, ha ga-emelite ya? Eleghị anya ee, mana enwere mmemme mgbe niile a gbahapụrụ (ma ọ bụ ndị na-ebugote ya), ebe ihe dị adị adịghị mma. Ọ bụ ihe m tara ahụhụ na CentOS: enweghị nsogbu mgbe otu izu gachara (naanị na distro nke ihe dị ka nke a mere m na m na-ekwu ya, ya na ndị ọzọ niile ihe na-arị elu mgbe niile), mana ọ bụ oge iji dọpụta ebe ndị dị n'èzí ebe ị Usoro etiti siri ike ma ngwa ị ga - eji enweghị onye na - ekwe gị nkwa ọ bụla. Slackware dịka ọmụmaatụ enweghị ihe ọ bụla iji mepụta (LXC kachasị), ị ga-aga Slackbuilds iji nweta ya.
Ga-enwerịrị ike ịhapụ Debian n'azụ wee mee mgbanwe ahụ site na ụdị ịchụ àjà a, petercheco?
Ndewo OtakuLogan na ekele maka okwu na-arụpụta: D. Ekwenyere m na nkwụsi ike nke Debian ma ọ bụ RHEL / CentOS dị na nnukwu ọkwa. Agara m site na ọgba aghara abụọ ahụ ị na-ekwu na m nwere ike ikwu na mgbe ọ bụla ị na-eji repo ndị ọrụ, ị ji n'aka na 99% ọ nweghị ihe ga-eme gị. N'ezie, ọ bụrụ na itinye nkwụghachi nke rpmfusion, adobe na epel na CentOS gị, ihe gbanwere nke ukwuu. Ọbụghị naanị n'ihi ngwungwu ị ga - awụnye site na ndagwurugwu ndị a, kamakwa n'ihi nchịkọta junk nke ha wụnyere na oghere ndị ha nwere ike ịnwe.
Site na slackbuilds okwu a dị obere ebe ọ bụ na ịmara ihe nchịkọta na ịdabere na ị ga-arụnye yana ị gaghị awụnye ngwugwu na-adịghị mkpa iji rụọ ọrụ ọ bụla nke ngwanrọ ịchọrọ itinye na slackbuilds. Buru n'uche na slackbuilds na-arụ ọrụ na koodu isi ma na-agbakọta ngwugwu na sistemụ gị. Ikwesiri icheta na naanị nsụgharị nke ngwugwu na ngwugwu anwale na-ebipụta na slackbuilds. Ihe Nlereanya: VLC na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị dị na mbipute 2.1.3 ma na slackbuilds mbipute ya bụ 2.1.1. Banyere enweghi ike nke sistemụ .. Ọ bụrụ n ’iburu n'uche na a chịkọtara nchịkọta ndị ahụ maka kọmputa gị, nke a ga - ebelata 0 enweghị ike nke pc gị ebe ọ bụ na n’ ọnọdụ ọ bụla enweghị nsogbu ga - emetụta mmemme ahụ n’onwe ya. M nwere ike ikwu na ị ga-eme obere uto nke Virtualbox na ị ga-ahụ uru ndị a distro nwere.
Ana m agwakwa gị na mụ onwe m nwere otu echiche ahụ otu unu siri chọọ Slackware: D.
Ekele Linux na enwere m anya na azala m ajụjụ gị 🙂
Bịa, ọ mere ka m chọọ ịlaghachi na slackware.
Slackware ga-amasị m ịwụnye ndị na-adabere ma na-agagharị, mana ọ bụghị ihe niile nwere ike ịbụ haha. Ma m na-ahọrọ slackware ka debian ma ọ bụ gentoo.
Ọfọn, ịlaghachi ekwuola ya .. Slackware nwere ngalaba dị ugbu a ma ị nweelarị ya ịtụgharị 🙂
Maka na enwere Arch, ọ na-agagharị yana na ABS na PKGbuilds ị nwere ike ịme otu ihe ahụ dịka nke Slackbuilds ma ọ bụrụ na ịchọrọ na iwu "makepkg -s" m ga-edozikwa ihe ndabere na akpaghị aka.
Site na ihe m na-ahụ, ọ masịrị Arch Linux, belụsọ na ị nwere ike ịgwa m ụfọdụ uru Slackware nwere gbasara Arch, n'ihi na ruo ugbu a, ahụbeghị m
ha niile nwere amara ha…. mgbe ike gwụrụ gị na otu, ị gbanwee ọzọ na na na haha
Use na-eji windo 7 agbanyeghị ya
Azịza gị na-atọ ụtọ, petercheco. M na-etinye ya na akaụntụ, ọbụlagodi na m ga-agbaso nduzi gị iji nwalee ya dị ka nke ọma. Daalụ!
Ezigbo ndu, anyị ga-anwale ya. Site na ihe ị na-ekwu, echere m na tupu ịwụnye ngwugwu ị ga-eleba anya na ndị ịdabere na ya mgbe ị wụnye nchịkọta ị ga-etinye ndị ndabere. M ga-elerukwu anya. Ọ dị m ka ụdị Bsd karịa linux ... Daalụ 🙂
N'ezie. Have ga-etinye ihe ndabere niile tupu mmemme ahụ n’onwe ya. Uru dị na sbopkg ebe ọ bụ na ị wụnye ya niile n'otu .. Ihe Nlereanya: Lee iwu iji wụnye VLC. Ihe niile tupu vlc (n'otu iwu ahụ) bụ ndị dabere na VLC ma ọ bụ na mmemme nke VLC chọrọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-agwa sbopkg na iwu niile ịdabere na mmemme ikpeazụ na njedebe ma ọ na-elekọta ibudata, chịkọta ma wụnye ngwugwu ọ bụla n'onwe ya. Ọ na-aga ngwugwu site na ngwugwu ruo mgbe ihe niile mere. Ma ọ bụrụ na Slackware dị nso na Unix 😀
A ga-ekele gị maka na ị na-eji Slackware yana n'ihi na ọnweghị ihe ọ bụla sitere na ya. Agbanyeghị na ọ dị m ka ikwubiga okwu oke ókè na arụmọrụ ahụ. Na tiori na aghaghi inwe kariri, ma obughi ihe di oke itunanya. Ana m agwa gị na ejiri m Arch na Slackware n'otu oge. Ebee ka o bu ihe ama ama na Gentoo, karisia KDE juru m anya.
Ọ bụ ezie na m ghọtara, enwere m mmetụta ahụ nke kachasị njikarịcha na ọ dị mma. Mana ọ naghị eso ụdị Slackware aga, ike gwụrụ m ma chefuo ya, kama enwere m mmasị etu esi eme ihe niile na Gentoo ọzọ.
Gentoo dị mfe maka m iji ya, ọ nwere ike ịchọ nyocha ọzọ iji ya, mana ọ bụ opekata mpe ya. Ọ bụrụ na anyị anaghị atụle nwụnye.
Daalụ nke ukwuu: D. Ana m ekele gị maka iji Gentoo ma kwenye gị na ọ dị mfe ijikwa otu oge awụnyere ekele maka ndozi: D. Gentoo na-adọta m mana ntinye Gentoo adịghị nwayọ ma anaghị m agwa gị ihe ọ bụla iji kpokọta KDE niile ị ga-enwe nnukwu ndidi: D. Banyere arụmọrụ ahụ, enweghị m ike ịza ajụjụ ebe ọ bụ na emere m nhọrọ nchịkọta nhọrọ nke nchịkọta n'oge nrụnye yabụ naanị m nwere ngwa m nwere mmasị ịnwe yana dịka gburugburu ebe m tinye KDE naanị. Mmetụta m nwere na laptọọpụ m nwere isi na nnukwu ebulu bụ na Slackware na KDE na-agba ọsọ nke ukwuu, na oke esemokwu nke distro a na Debian, Arch, openSUSE bụ nke m dị oke ama: D. Echere m na ọ dabere na ngwaike nke mmadụ ga-aghọta karịa ma ọ bụ obere esemokwu nke distro ọ bụla.
Ekelekwaa m. Ugbu a, m na-eche banyere ya, ntakịrị ntinye nke KDE na Debian ma ọ bụ Arch na-amanye gị ịwụnye nchịkọta iwu. N'aka nke ọzọ, na Slackware ị nwere ike ileghara anya ole na ole n'ihi na ọ chọghị ha. Yiri nke Gentoo, o nwere ihe nrụnye KDE 3 dị iche iche, nke zuru ezu, nke bụ isi, na nke kachasị elu na-enweghị mgbakwunye na-enweghị isi. Nke m họọrọ nke ikpeazụ. Ọ mara mma.
Na PC m nke nwere Debian Wheezy nke nwere 1GB RAM na 2.8 Ghz Pentium D, nke mbụ, etinyego m ngwugwu KDE-Meta na-ahọrọ ihe kachasị mkpa iji rụọ ọrụ; Mgbe ahụ, amalitere m ịdaba GNOME 3.4 n'onwe ya mgbe nọ na desktọọpụ KDE, enwere m ahụ iru ala na KDE na desktọọpụ PC.
Na Slackware, anwalela m arụmọrụ ya na igwe arụmọrụ yana KDE, yana akụkụ ya niile, na - agba dịka silk. Ọ bụ ihe ịtụnanya GNU / Linux na ihe m na-akwa ụta maka ịnwale.
Ọzọkwa, Slackpkg na-enye gị nnwere onwe ịhọrọ nke ịdabere na ịchọrọ ịwụnye na ngwugwu ọnụọgụ abụọ (nke APT na Pacman anaghị ahụ).
Ọfọn, arụmọrụ ahụ pụtara ìhè, na ọtụtụ. Ihe niile dị oke mmiri. Iji nye gị ihe atụ, My Slackware 64bits nwere desktọọpụ XFCE na-egosi oriri nke 245mb RAM mgbe ịmalitere. Na OpenSuse ma ọ bụ Fedora na otu desktọọpụ oriri nke ihe dịka 354mb (wepụrụ ụfọdụ usoro site na mmalite).
N'aka nke ọzọ, agaghị m akwado onye ọ bụla iji ebe nchekwa dị ugbu a, n'ihi na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na mgbe nwelite ihe anaghị arụ ọrụ maka gị ma ọ bụ na ọ naghị amalite usoro ahụ. Oge ikpeazụ ọ mere m, GDM kwụsịrị ịrụ ọrụ (aghaghị m iji Ctrl + elu + F1 iji bido ma gbanwee gaa Slim), Gedit, Viewnior na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ.
Ezigbo petercheco, nke mbụ ekele maka ndu.
Gụ ihe niile site na nzọụkwụ m hụrụ ihe ọ pụtara na usoro niile ma e wezụga otu:
Kedu ihe kpatara nke a, dabere na googlecode.com, mgbe anyị nwere ike iwunye dbopkg 0.37 site na nkwụnye ọrụ gọọmentị dịka ibe akwụkwọ ngo ahụ?
Site n'ime ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ na anyị anaghị ekpughere onwe anyị ịbụ ihe na-adịchaghị mma maka ọdịnihu?
Ndewo, ọ na-atọ ụtọ ihe ị tinyere mana na peeji nke Slackware gọọmentị na-abịa nke a:
Ke ukara repos nke distro ọ bụghị ozugbo :).
Kedu ihe dị egwu, kedu ka ọ ga-esi kwe omume na ha edozighị ụdị nnukwu nsogbu a http://www.sbopkg.org/downloads.php?
Daalụ maka ngwa ngwa azịza.
Enwere m ihe ọzọ ịgwa gị, agbanyeghị na echere m na ama m azịza ya. Otu n'ime ihe mere m ji hapụ Arch bụ eziokwu na ọ nweghị ihe ọ bụla karịa ịchọta nsogbu nchekwa ebe niile, ọ masịghị m ịghọ ọkachamara na nchekwa kọmputa iji nwee ike ịhazi ụfọdụ akụkụ na nkesa ndị ọzọ ugbua ha bịara m na ndabara.
Otu ihe ahụ na-eme na Slackware, echere m, enweghị usoro nchekwa site na nkeji 1, nri?
Ga-ahazi ha n'onwe gị.
Echeghị m na ị ga-ajụ ntinye aka dị ka Arch, ebe ọ bụ na n'otu ihe ntanetị Slackware ahụ, ọ na-enye gị ụlọ ọrụ iji wụnye SELinux na-akpaghị aka yana ọbụlagodi, ọ naghị eri akụrụngwa.
Banyere Arch, ihe na-atụ m ụjọ bụ ọsọ nke ha gbanwere nsụgharị nke ihe ndị kachasị emetụ ha n'ahụ, ruo n'ókè nke na ha mere ka m laghachi na atọ Marys nke nkwụsi ike na GNU / Linux (Debian, Slackware na RHEL / CentOS).
Ọfọn, Eliotime3000 azala gị, mana dịka ị pụrụ ịhụ na ọkwa m, m na-etinyekwa ọkachamara ọkachamara nhazi: ufw. Nke a na - enye gị ohere ịgbakwunye parameters na firewall (netfiter ma ọ bụ iptables ... ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya) n'ụzọ dị oke ọsọ ma dịkwa mfe: D.
Ọzọkwa iji nweta nchebe karịa, ịnwere ike ịwụnye ihe atụ2 iji kpuchido pc gị ka ọ ghara ịnwale site ssh ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ: D.
Achọrọ m itinye aka m na distro a ogologo oge, mana iji aka m wụnye ndị m chere na ọ nwere ike bụrụ ezigbo iwe, agbanyeghị ekele maka nkuzi ahụ, ma eleghị anya otu ụbọchị m ga-enwe obi ụtọ.
Ana m asị gị nnọọ. Hụ na m na-esi na akpaghị aka sistemụ nwere njikwa karịa sistemụ na ịdabere 😀
Ọkacha mmasị m KISS distro ... Na eziokwu, ọ bụ KISS kacha mma nke m gbalịrị ugbu a, ebe ọ nwere uru nke iji ọnụọgụ abụọ (dịka Debian na ndị ọzọ na-eji slapt-get ma ọ bụ slackpkg wụnye site na backports) ma ọ bụ mkpokọta dị ka Gentoo (sbopkg).
Agbanyeghị, distros dị ka Slackware, ọ dịghị onye, ​​na ukara backports (dị ka Slacky.eu) bụ ndị ọzọ maara nke chinchi na melite ka ihe kasị version na dezie isi iyi koodu.
PS: ọ na - eme ka ịchọrọ ibudata koodu iyi Iceweasel ma wụnye ya na sbopkg.
N'ezie: D. Site n'ụzọ .. Kedu distro ị na-eji ugbu a? Ama m na I no na Slackware, Debian na Arch mana kedu nke gi hotara ka onye obula gha eche 😀
Ikwu eziokwu, ọkacha mmasị m distro bụ Debian, ebe ọ na-enye m a ngwa na mfe echichi iji na imeghari (ma ọ bụrụ na mmadụ na-akpọ asị ọnụ, m wụnye center software ma ọ bụrụ na ọ bụ a GTK desktọọpụ ma ọ bụ Apper ma ọ bụrụ na ọ bụ KDE).
N'akụkụ Slackware, ana m ahapụ ya maka PC nke anaghị akwado kernels na PAE dị ka Pentium IV ochie m ma ọ bụ PC nke na-agba ọsọ Windows XP.
Ka o sina dị, enwere m olileanya na nwanne m nwoke ga-akwaga faịlụ ya niile na PC ya iji wụnye Slackware 14.1 ma nwekwaa, na ọ na-aga n'ihu ịnụ ụtọ XP na VirtualBox (ọ masịrị ya ozugbo m wụnye ya na akwụkwọ ndetu ya na Windows 7, ebe ọ dabere na ngwa ikike ya Ihe omume PIC na PLC's).
oge…. gbaghara nzuzu m .. ma na slack .. m nwere ike ịwụnye ngwugwu .deb… ??????
ọ bụ n'ihi ndị nbipute m ..
petercheco .. a oké ndu na-ebipụta .. na i mere m chọrọ na-agbalị slack… nnọọ ekele ..
Ọ bụrụ na ị jiri Alien packet converter, ee; ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji slackpkg iji wụnye nchịkọta .deb, ọ dịghị.
Ngwanu @patodx 😀
Ntakịrị rudimental ahahaah
Site? M ga-ekwu ọtụtụ ma ngwa ngwa gụnyere ngwanrọ nke anyị ji kacha most
Meh, ma ọ dịkarịa ala, ọ naghị etinye nchịkọta ndị ọzọ n'ime gị nke ị na-achọghị.
N'ezie .. Mgbe onye ọ bụla na-ahọrọ nchịkọta ha chọrọ ịwụnye .. Naanị chọọ ha na slackbuilds.org ma wụnye ha na iwu sbopkg -i "package_name" (ma ọ bụrụ na ọ nweghị ntụkwasị obi) ma ọ bụ sbopkg -i "name_of_dependency package_name" (maka wụnye ndabere + ngwugwu n'onwe ya) 😀
Agbalịrị m Slackware ọtụtụ ọnwa gara aga mgbe mbipute 14.0 bịara, ntinye ya dị iche na nkesa ndị ọzọ mana ọ naghị esiri ike ka ụfọdụ ndị na-ese ya ma nye m mmetụta nke nchekwa (na ọkwa nke nchịkọta gọọmentị) nke nkesa ole na ole nyere m; ma m na-ewere ya dị ka njehie na a igbu oge ghara inwe ike iji wụnye ndabara a usoro na ihe ndị kasị isi ma ọ bụ ka nwere ihe kachasị kernel ma si otú belata loading oge. Ee, ọtụtụ n'ime gị ga-agwa m na m nwere ike iji aka gị mee ya na nrụnye, mana ọ bụ ihe m na-akatọ: ikpebi ihe karịrị ngwugwu 100 ma ọ bụrụ na m ga-etinye ya ma ọ bụ.
Zaghachi na r0uzic
Dị ka ọ dị, Slackware installer ga-egosi gị ndepụta nke otu nchịkọta nke ịchọrọ ịwụnye (site na nke kachasị ruo na nke kachasị mma, dị ka ngwugwu egwuregwu KDE), mana iji kwuo eziokwu, kernel buut dị maka sistemụ ahụ. buut nke yiri UNIX / BSD (n'eziokwu, OpenBSD na-ewe ruo mgbe ebighị ebi maka ndị na-agba ụta).
Enweghị m ike ikwenye ọzọ .. can nwere ike ịwụnye otu ngwanrọ ngwanrọ A, AP, D, F, K, L, N, X na ị nweelarị sistemụ ntọala nke ịmalitegharị ịwụnye ihe ọ bụla ịchọrọ: D.
Ntakịrị banyere nke a: http://www.slackwiki.com/Minimal_System
Ntuziaka ahụ dị mma, agbanyeghị na m hụrụ ka ịdị umengwụ si arụ ọrụ, echere m na m bụ onye Arch. Echere m na nke ahụ bụ ihe a na-ewere mgbe niile maka ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na peeji ọ bụla dị mma ga-ahụ njehie ndị ahụ. Olileanya site na Linux ha na-etinyekwu mgbalị na nke ahụ.
@Petercheco si Czech Republic, yabụ na ị gaghị ata ya ụta otu ahụ maka ịsụpe ajọ okwu dị otu ahụ (n'eziokwu, oge ụfọdụ ide ihe n'asụsụ abụọ ma ọ bụ karịa na-akụda mmụọ).
Ka o sina dị, na isiokwu ahụ zuru oke karịa nke m, ọ kwesịrị ka e nyekwuo ya.
Abụ m onye ọrụ Debian mana agbalịrị m ịme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa niile, ma ọ dịkarịa ala ndị mbụ niile sitere na nke ndị ọzọ. N'ime ha, Slackware bụ nke kachasị amasị m, ọrụ slackbuilds na mbụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya mana ọ bụghị karịa iji AUR na ArchLinux.
Slackware dị ka Debian na-abụkarị nkwụsi ike dabere n'agbanyeghị ma ọ bụ na ọ bụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụrụ na enweghị ahụhụ, yabụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị nkesa ka na-eji Lilo kama iwe iwe dị ka bootloader.
Ọ dị m ka nkesa dị mma, ọ bụrụ na m 'si' Debian 'm ga-adaba na netwọkụ Slackware, n'ihi na Gentoo siri ike karịa iji ya.
Ee, ọ bụ eziokwu na m ga-enwe ntụgharị asụsụ ọzọ, mana ọ bụ ihe na - eme ma mmadụ dee edemede n ’elekere 12:XNUMX nke ehihie na Czech Republic: D. Na mgbakwunye, ekwesiri iburu n'uche na otu ndị na-asụ Spanish na-emehie okwu nsụgharị: D.
Ekwenyere m. Oi en dya ndi mmadu anaghi ede vien, zon hunos berdaderos hanimales nke lenhua casteyana.
Echere m na Petercheco kwesịrị ide na Czech site ugbu a, ka anyị wee ghọta nke ọma ihe enyi anyị pụtara na nkuzi, ebe ọ bụ na Spanish abụghị asụsụ ala nna ya.
Okwu gị mere ka ehihe m na-arụ ọrụ nwee obi ụtọ: D. Daalụ :). M na-eche na mgbe m kwuru, m chịrị ọchị ruo nkeji iri
Otu ihe ..
Hos m na-akwado na akụkụ nke nhazi repository na-enweghị nchekasị nke:
Ndia putara ihe na nke mbu: D. Ọ bụ bụrụ na nchekwa nke mba ndị kwekọrọ na ha ada.
Ndo "Akwadoro m gị"
Ekwenyesiri m ike na isiokwu Slackware a, mana, agbakwuru m nsogbu mgbe m na-ahazi netwọkụ Lan m, ahụghị m ebe ọ bụla, ihe ngwọta maka nsogbu netwọkụ m, yabụ, alaghachila m na Openuse, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe nhazi nke a Lan. Ana m ekele ndị chọrọ ma nwee oge ịmụ ihe, mana dịka onye ọrụ na-achọ azịza ngwa ngwa, ahụghị m Slackware.
N'oge usoro nrụnye, ihe nrụnye na-ajụ ma ịchọrọ ịhazi netwọkụ. Say sị ee wee họrọ nhọrọ Njikwa Network. Kpachara anya, enwere nhọrọ anọ na otu n’ime ha bụ DHCP. Emela họrọ DHCP ma ọ bụrụ na ọ bụghị Network Manager. Ofu nsogbu ebe ọ bụ na netwọk gị njikọ ga-jikwaa site Network Manager 😀
Ozi ndị ọzọ, nke nwere ike ịmasị gị:
M wụnye slackware na Nec Versa M320 ma soro ntuziaka gị, ọkachasị sbopkg -i "kcm_touchpad" mana mmachi m anaghị arụ ọrụ.
Elegharịrị m anya ma ahụbeghị ihe ngwọta maka slack 14.1.
Ekwesịrị m iji aka dezie faịlụ nhazi x11?
Ndewo, mgbe ị wụnye ngwugwu a, ị ga-ahụ nhọrọ iji hazie kọntaktị gị na nhọrọ KDE usoro -> ngwaọrụ ntinye -> touchpad.
N'ebe a ka ị ga-agbanwe ya maka mkpa gị: D.
Ọ bụrụ na iji KDE jiri XFCE, gaa na ụlọ ọrụ xfce -> òké na touchpad ma mee ntọala ndị achọrọ :).
Ihe sistemụ ahụ anaghị achọpụta ya. Mgbe m banyere nhazi touchpad site na kde, na ozi ọ na-agwa m aha Touchpad: Ngwaọrụ ahụghị
Nnọọ ịmata ikpe gị .. The touchpad anaghị arụ ọrụ kpamkpam ma ọ bụ na-arụ ọrụ ọkara? Kedu ka esi etinye usoro?
Onweghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ. Echichi ahụ mere site na isoro nkuzi a.
You mara ihe ị ga-eme iji lelee ma kernel ahụ na-ebugharị ihe mmetụ ahụ?
Mana ekwughi m maka nwụnye .. Ihe m ga-ekwu bụ post-nwụnye: D.
Ikekwe anaghị akwado emetụ aka gị, mana nke a bụ oge mbụ m hụrụ ya :). Ọ bụrụ na ị wụnye ngwugwu X n'oge nrụnye, touchpad gị kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Na ntinye Slacware oge gosipụtara na ọ na-ajụ gị ụdị oke ị chọrọ iji. Ga-ahọrọ ndabara Vídně: imps2mouse.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nhazi akwụkwọ ntuziaka, ị ga-edezi ma ọ bụ mepụta faịlụ /usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
Onyinye magburu onwe ya, ejibeghị m slackware ruo ọtụtụ afọ, site na nkesa a ka m malitere na GNU / Linux na mbipute 10, ekwesịrị m ịhapụ ya ogologo oge gara aga n'ihi na tupu m ejiri aka m wụnye ihe niile, m ga-achọrịrị nke ọ bụla na-adabere, mana hey aga m gbalịa ọzọ, Daalụ maka Nduzi ahụ
Ezigbo mma post; nke dị elu na nke ka mma, ịnwere ike ịmụ ntọala mgbe niile nwere ike ọ gaghị adị na nkuzi ndị ọzọ yana nke ọzọ.
Ihe na - apụ apụ na Slackware bụ njikọta nke KDE na oke mmiri nke ngwa ahụ ji agba ọsọ, ee ee, achọpụtara m na ọ dị ntakịrị karịa Archlinux.
Ihe arụmọrụ, enwere m ike itinye ya na ajụjụ, kedu maka Gentoo?
Aga m enye gị otu nke CentOS m na kernel nke anyị na Slackware na kernel ... ka anyị hụ ebule, ọsọ na nkwụsi ike megide nrụgide CPU onye na-enwetakwu uru 🙂
Ọ dị mma, wụnye igwe arụmọrụ abụọ .. Otu nwere obere CentOS na kernel ọdịnala gị na nke ọzọ nwere obere Slackware (wụnye otu ngwanrọ iji nweta nwụnye Slackware pere mpe: http://www.slackwiki.com/Minimal_System) ma bipụta nsonaazụ gị 😀
magburu onwe isiokwu, ekele, M ama na-anwale a distro, na ị nwetara m ozugbo ala ISO.
Naanị obere ajụjụ, aga m etinye ya na igwe nyocha m, ebe m nwere ọtụtụ distros ndị ọzọ arụnyere, Debian Jessie, Arch, Ubuntu 14.04, OpenSuse, KaOs, Trsiquel, ha niile si na GRUB2 bufee. Ahụrụ m na n'isiokwu gị ị na-ekwu maka Lilo (afọ ole ka nke ahụ dị?).
Ajụjụ bụ, enwere m ike ịhọrọ ịwụnye GRUB2 kama iji ojiji wee mee ka ọ mata distros ndị ọzọ ịtinyela?
Ndewo Essaú ma daalụ maka okwu gị: D. N'oge nwụnye sistemụ na-akpaghị aka na-etinye Lilo.
Nwere ike iwunye grub (grub2) nke na-abịa na Slackware DVD yana usoro ndị a:
Ozugbo ị mechara wụnye Slackware na ozi a gosipụtara: "Ntinye Slackware Linux agwụla."
wụsara-wụnye / dev / sda
Na voila: D .. Ozi ndị ọzọ gbasara nke a:
Otu ihe ọzọ ...
A tọhapụrụ mbipụta ikpeazụ nke anụ ụlọ na-erughị otu afọ gara aga (June 7, 2013) na taa Slackware nwere nkwado UEFI na Lilo.
Ozi ndi ozo: http://en.wikipedia.org/wiki/LILO_%28boot_loader%29
ezigbo ndu Peter.
n'aka nke ọzọ, ọnwa ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ọ na-akwa ụta maka ịdị umengwụ ma laghachi na rhel, ọ bụ ezie na n'okwu a centos ma na 7 on
Daalụ: D. Ọfụma hoigo na-agba ume na ifufe na ha na-ekwu, na m na-anọnyere Slackware, ebe ọ bụ na m nwere mmasị na ya nke ukwuu ma nwee ihe niile n'aka m :). Na mgbakwunye, arụmọrụ a jọgburu onwe ya ma echefuru m banyere nchekwa na mgbakwunye nhazi nke ihe ndị dị mkpa, ụgwọ ma ọ bụ ngwugwu rpm na ntụkwasị obi ha: D. Na nne Slackware enwere m nnwere onwe na ọtụtụ karịa ana m achọpụta na echepụtara Patrick Volkerding banyere Linux taa.
Ọ dị mma na nkwado ọ nwere enweghị atụ:
Otu ajụjụ: Enwere m ike ịwụnye desktọọpụ abụọ ma ọ bụ karịa? Dịka ọmụmaatụ, bido taa na KDE, echi site na XFCE na izu na-abịa site na Cinnamon.
Ndewo, n'ezie ị nwere ike inwe ọtụtụ edemede .. N'ezie, Cinnamon ga - achịkọta: D.
Ihe omuma ebe a: http://slackblogs.blogspot.cz/2014/04/cinnamon-slackbuilds-csb-for-slackware.html
Ezigbo nkuzi, ana m eji Slackware kemgbe 1998 ma enwebeghị m nsogbu na sava, anaghị m etinye nchịkọta sitere na slackbuilds na ha ebe ngwugwu ndị dị na nchekwa gọọmentị zuru. N'ụlọ m, m na-ejikwa ya na nke a ma ọ bụrụ na m na-eji slackbuilds maka nchịkọta dị ka vlc, ọ bụ ezie na m na-ejikwa ya mgbe niile ./configure && make & make ịwụnye n'etiti ndị ọzọ.
Ekele ọzọ na nkuzi a na nhọrọ ị mere!
Daalụ nke ukwuu Oscar, Obi dịkwa m ụtọ na m kpebiri iji Slackware. 🙂
Chaị, ị ga-abụrịrị onye hacker :).
Mgbe ị kwalite site na slackware gaa na nsụgharị ọzọ, ị na-etinyegharị ma ọ bụ kwalite?
Ọma ị nwere ike nweta nkwalite na-enweghị nsogbu na:
1 Celsius Tinye ihe ndozi nke ohuru na / etc / slackpkg / mirror
Nwelite nke abuo na:
slackpkg nweta nkwalite-niile
Họrọ leta K iji debe nhazi ahụ mana ị na-ele nhazi ọhụrụ nke nchịkọta
3rd slackpkg wụnye-ọhụrụ
N'ezie, ọ masịrị m ịme nwụnye dị ọcha ebe ọ bụ na Slackware na-arụ ọrụ nke ọma na ọ dịghị mkpa imelite ọ bụla abụọ site na atọ na mbipute version
Slackware, dị ukwuu, m na-amụta ọtụtụ!
Ajụjụ, mgbe modifying /etc/profile.d/lang.sh M tinyere:
mbupụ LANG = es_XX.utf8
mbupụ LANGUAGE = es_XX.utf8
mbupụ LINGUAS = es_XX.utf8
mbupụ LC_ALL = es_XX.utf8
XX: mba kwekọrọ
Ọ na-arụ ọrụ OK
Ahụigodo bụ nsogbu ahụ, ọ naghị ewe Latin Latin ma ọ bụ Spanish keyboard (ị ga - ahụ na enweghị m ike ide), ahọpụtara m olpc / es-olpc | olpc / es-olpc.map nke na ntinye oge zara, mgbe ahụ mba. Enwere ike idozi ya na slackbuilds? Gịnị ka m kwesịrị ịkọwa na nwụnye? Kedu ihe m ga-emegharị? Banyere.
Zaghachi ka amilkar
Gbalịa mepee ọnụ na-enweghị mgbọrọgwụ (ya bụ, na aha njirimara gị) wee dee:
Ozi ndi ozo: http://docs.slackware.com/howtos:window_managers:keyboard_layout
Na mkpokọta, enwere ike ịhazi keyboard ozugbo na gburugburu desktọọpụ ị na-eji.
I kwuru na ị setịpụrụ /etc/profile.d/lang.sh, mana ị setịpụrụ /etc/profile.d/lang.csh nakwa?
mbupụ LANG = es_ES.utf8
Ezigbo Uru: 3
Ekele diri onyinye a na obodo Petercheco slacker.
Adị m onye ọrụ slackware kemgbe slackware 13 na eziokwu bụ na ọ bụ ihe kachasị mma m nwere na draịvụ ike m, agbalịrị m ndị ọzọ mana m laghachiri slackware mgbe niile (Gentoo Achọrọ m ya) ma ugbu a naanị ihe m na-eche banyere ya bụ nkwụsi ike ma ọ bụ ugbu a?
Naanị ihe m hụrụ na-efu bụ obodo ndị na-asụ Spanish na obodo a tụrụ atụ ma ọ bụ ezigbo ọgbakọ na-arụ ọrụ nke nwere ọtụtụ isonye. Iji dozie obi abụọ onye ọ bụla, anyị niile kwesịrị ịmụ ihe na ọ dị mma ihie ụzọ 100, ya mere ndị mmadụ ga-atụfu ụjọ ha maka ebube Gnu / linux distro a.
Nke a na-adakwasị m mgbe m hụrụ na ndị mmadụ na-eji ohere a na-ekele onye edemede na nke post a yana site na ụzọ ha si enwe obi abụọ ọ bụla, ọ ga-adị mma ịnweta ebe ka anyị niile nwee ike ịkọkọrịta ahụmịhe anyị ma mụta karịa na ịghara ịtụfu nke ukwuu (linux ajụjụ).
Ihe dị elu karịa mmadụ jụrụ ihe kpatara etinyeghị sbopkg ma ọ bụ slackpkg, azịza ya dị mfe, ha bụ ngwugwu nhọrọ ya mere ọ na-agbaji nkà ihe ọmụma KISS maka otu ihe kpatara slackware64 enweghị ndakọrịta na 32bits, ọ dị "njikere" mana ị ga-agbakwunye a software oyi akwa na-enwe ike na-agba ọsọ / ikpokọta 32-bit software.
Onye ọrụ ọzọ jụrụ ka esi agbanwe site na kde gaa na gburugburu ebe dị iche, n'ihi na dị ka Petercheco kwuru na a chịkọtara ya wee gaa na njedebe: $ xwmconfig
Na menu gosipụtara ebe ị nwere ike ịhọrọ nke ịchọrọ (nke etinyere na mbụ). Mgbe ahụ, anyị gbanyụọ X, $ startx na-esote na ọ bụ ya.
I meela nke ukwuu maka inye azịza gị yana maka nyocha nke post m ma ekwenyere m, achọrọ weebụsaịtị ndị ọzọ na-asụ Spanish banyere Slackware: D.
A na-anabata gị Petercheco, ọ bụrụ na ọ dị mwute ịhụ na ọ nweghị onye nọ na # slackware-es de freenode, ị nwere ike ịmepụta ọwa dị iche, dịka Slackeros ma ọ bụ Slackos ma ọ bụ aha ọ bụla ọzọ, ihe siri ike banyere ọwa irc ndị a bụ ime ka ha na-arụsi ọrụ ike yana ọtụtụ ndị ọrụ ... .
N'elu m tinyere * Slackpkg na ọ pụtara slapt-get 🙂 ebe slackpkg so.
Ekele m wee gaa n'ihu na-enye mkpanaka slackware ruo ọtụtụ afọ!
Ndewo Petercheco 🙂
Enwere m mmasị na post a na ihe m ga-eme mgbe ị wụnye Slackware. Ọ dị mma maka onye ọ bụla nwere mmasị ịnwale ma nwalee OS * Linux.
Anọ m na-eji Slackware kemgbe 1994. M nwere mgbe niile a Slack njikere ịga; ugbu a Slackware 14.1.
Agbanyeghị, ejibeghị m ya ọtụtụ ọnwa n'ihi na nkwado "nVidia Optimus" abụghị nke tozuru oke dịka m chọrọ maka Slack.
Achọrọ m ịwụnye nchịkọta "bumblebbe na bbswitch" maka kaadị nVidia ka a ga-apụ; ebe ọ bụ na ọtụtụ oge ahapụla m Intel jikọtara ọnụ nke i7.
N'ihi post gị echetara m ihe m na-echebaraghị oge ikpeazụ m gbalịrị ịwụnye nchịkọta ndị a: "enweghị nkwekọrịta na 32 bits !!"
Naanị m mere nyocha ma chọta nke a HOWTO nke na-akọwa otu esi etinye nkwado maka kaadị nVidia Optimus na ndị ọkwọ ụgbọala nVidia; ma ... ọ ka dị mkpa iji tọghata usoro ahụ "multilib"; na nke a bụ ihe m na-echeghị!
Ọ bụrụ na m nwere ezigbo Slackware Linux 64; ọ bụ n’ihi na achọrọ m ka ọ dịrị otu ahụ. Gbakwunye akwa ndakọrịta maka 32-bit adịghị m ka ihe kwesịrị ekwesị.
Amaara m na nsogbu ahụ bụ na nVidia anaghị enye nkwado zuru oke maka kaadị eserese ya na gburugburu GNU / Linux.
Aga m echere ụdị nkwado, ọbụnadị mpụga, nke na-enye ohere itinye nwụnye ngwanrọ a na-enweghị ịme usoro "multilib".
Daalụ maka ichetara m 🙂 Amaliteghị m Slack maka ọnwa n'ihi na Linux Mint 17 nkwado maka nVidia Optimos na-arụ ọrụ (ya na ndị ọkwọ ụgbọ ala Noveau) site na ntinye ma nwee nkasi obi na mmadụ ga-echezọ ebe o si: - /
Imirikiti ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ na Slackware !!! 🙂
Ihe oyiyi gị ga-adị mma karịa na njikwa window dị ka Enlightenment 16 😀
I meela ezigbo enyi m ... Anọ m na-awụli site na distro na distro, mana alaghachila m na Slackware na KDE. N'ezie, n'oge a Slackware Ugbu a ma echere m na Slackware 14.2 ma ọ bụ 15 anyị ga-ahụ, ọ dị ka ọ na-aga caramel: D.
Magburu onwe petercheco!
Enwetụbeghị m ụdị distro a ruo taa, achọrọ m ndị ọzọ mgbe niile na onye nhazi eserese na onye na-eme ihe n'eziokwu banyere mgbanwe n'etiti windo na Gnu / Linux, mana ọrụ Slackware juru m anya, m ka kwesịrị ịhazi ụfọdụ ihe ndị dị mkpa dị ka kiiboodu na ihe, mana echeghị m na ọ gbagwojuru anya.
Naanị ihe m na-akwa ụta bụ na o were ogologo oge tupu m nwaa ọrụ nka.
Ekele na ekele maka nnukwu isiokwu, ọ bụ nnukwu enyemaka.
Ndewo enyi ma kelee gị nke ọma maka akara dị mma nke edemede m :). Obi dị m ụtọ ịhụ na ọ na-enye aka maka ndị ọrụ :). Ekele ma nwee obi ụtọ na distro ...
Ndewo ndị enyi m dị ọhụrụ na SLACKWARE CO nwere ike inyere m aka ịwụnye oriọna… BANYERE M
Nke a na-enyere gị aka: http://www.slackware.com/~mrgoblin/slackware-lamp.php
Daalụ nke ukwuu Peter.
I deela ezigbo ederede maka ndị ọhụrụ ahụ na slackware. O jekwara m ozi ọtụtụ na m na-eji distro kemgbe 2008.
Ihe dị ukwuu banyere slackware bụ na ọ naghị agbanwe ọtụtụ belụsọ na ọ dị mkpa. Ugbu a enwere ọhụụ ọhụrụ, slackware 14.2. Anyị na-echere ọkwa nkwụghachi ọhụrụ?
Daalụ maka post, o nyeere m aka ka ị ghara iche.
Adị m ọhụrụ na distro a, agụọla na LinuxQuestion na enwere ike itinye KDE Plasma 5 na Slackware 14.2.
Ihe m na-aghọtaghị bụ olee otu m ga-esi wụnye ya?
Kedu ka m ga - esi jiri nchekwa AlienBob?
Abịara m na ndapụta, nkuzi a enyerela m aka nke ukwuu n'ihi na achọrọ m ịnwale Slackware.
Ruo taa, m ka nwere arụnyere ya na desktọọpụ desktọọpụ m na-enweghị ọdịda, mụ, otu gafere. Ma ugbu a, m tinye ya na laptọọpụ m ka m banye n'ime ụwa nke Linux karịsịa (Slackware / Zenwalk)
Ọ bụ eziokwu na na mbụ ọ siri ike, ihe dịka mgbe m si na windo gaa ubuntu / linuxmint ... hahaha.Enwere m ime ọtụtụ nyocha na Linux.
Agbalịrị m ọtụtụ distros, mana nke a maka m bụ nke na-eme ka m mụta ihe na Linux. M ka nwere onye ọzọ site na ụlọ akwụkwọ ochie nke bụ Freebsd.
Onwere onye maara ka esi eme nkesa Slackware omenala? M na-enyocha lifelak mana amaghị m iwu ha bụ ..
Mgbe afọ 12 nke ikpe na njehie na nkesa dị iche iche, linux, bsd, windows, osx, achọpụtara m sistemụ nke na-arụ ọrụ maka m, m na-agbagha ngwa ahịa ndị ahịa na-etinye sistemụ, na-achọpụta, nyocha, achọrọ m ihe kwụsiri ike m na- ụbọchị nke slackware na mmụta, ihe niile malitere site na wifislax nke m hụrụ ngwa ngwa mgbe m lere anya, ahụrụ m na ọ dabere na slackware ... mgbe ahụ m gụrụ echiche nke ndị ọrụ nke ọkwa niile na ahụmịhe ha ... Enwere m adrenaline ọchụchọ mechara.
magburu onwe nzukọ m na-ahapụ ya dị ka nke ikpeazụ,
Jiri Ike, Luke!
Iweghachite Okwu Omuma: Returnlaghachi na ntanetị Firefox